Ogaden News Agency (ONA) – Xisbiga TPLF ayaan weli ka waantoobin dilkii iyo argagixisonimadii uu ku qabsaday xukunka Itobiya
Xisbiga TPLF ayaan weli ka waantoobin dilkii iyo argagixisonimadii uu ku qabsaday xukunka Itobiya
Wariye Itoobiyaan ah ayaa ka bad-baaday iskuday la doonayey in lagu khaarajiyo asbuucii hore dil arintaasoo ay ciidamada Sirdoonka iyo Baadhidda Dambiyada dalka Mareykanka ee loo yaqaano FBI.
Waxay shegeen FBI-da inay kashifeen iskuday la doonayay in lagu dilo wariyeha caanka noqday Abebe Gellaw, kaasoo ka hawl gala telefisionka ESAT ee xaruntiisu tahay dalka Mareykanka, kuna baxa luqadda xabashiga. Wariyahan ayaa ku soo caanbaxay isagoo ka dhex kacay shirkii saxafiga ahaa ee Meles Zanawi uu ku qabanayay dalka Mareykanka kuna qayliyay inuu shacabka Itobiya u baahanyahay Xoriyad ee aanu u baahnayn raashin oo kali ah. Waxaa caalamka laga daawaday waqtigaa Meles oo aad uga naxay qayladii Abebe Gellaw oo madaxa hoos u foorariyay.
Sirdoonka Mareykan iyo hay’ada baadhitaanka dembiyadda ee Federaalka (FBI), ayaa sheegay qoraal ay soo saartay in ay ka danbeeyeen isku dayga dilka wariyaha xubno kamid ah Sirdoonka Itoobiya oo adeegsanaya canaasiir xagjir ah oo ka tirsan ururka argagaxisada TPLF oo Mareykanka ku nool.
Sida laga soo xigtay afhayeenka waaxda baadhista dambiyadda ee magaalada Boston, Creg Comcowich, ayaa sheegay inay qabteen nin lagu magacaabo Guesh Abera, oo doonayey inuu khaarajiyo wariye Abebe Gellaw, oo si aad ah loogu xasuusto hadaladii bahdilka ahaa ee uu ku yidhi taliyihii geeriyooday ee Jabhadda TPLF, Meles Zenawi oo markaa ku sugnaa hall ay ku shirayeen madaxda wadamada ku bahoobay G8-ka.
Basaaska gacanta lagu dhigay ayey wararku sheegayaan inuu ka soo jeedo qowmiyada tirada yar ee Tigreega, isagoo lagu qabtay cadeymo muujinaya naqshadii uu la damacsanaa inuu ku fuliyo qorshihiisa dil, isagoo adeegsanayey dhawr basaas oo kale oo ku nool magaaladda Boston, magaaladan oo la sheegay inuu booqanayey Wariye Abebe Gellaw, oo dhaqaalo u ururinayey TV-ga ESAT oo ah mid madax banan.
Dambiile Abera, ayaa la aaminsan yahay inuusan kali ku ahayn falkan argagaxiso ee Jabhadda TPLF ka fulinaysay carriga Mareykanka, dhacdadan oo su’aal gelisay heerka burbur iyo quus ay gaadheen taliska Woyaanuhu rajadii ay ka qabeen inay sii adoonsadaan shucuubta ay gumeystaan.
Taliska Addis Ababa, ayaa la sheegay inay arintan u sameynayaa si baa la yidhi baqdin iyo khalkhal u geliyaan mucaaradnimada isa soo taraysa ee kaga imanaysay dadka wadankaas u dhashay ee ku dhaqan dibadaha, gaar ahaan wadanka Mareykanka oo ah meesha ugu badan ee ay ku sugan yihiin.
Afhayeenka FBI, ayaa kula taliyey in si dhakhso ah loo soo wargeliyo dhamaan dadka looga shakisan yahay hawlo basaasnimo ama lagu tuhunsan yahay inay u adeegayaan nabadsugidda Itoobiya, si looga qaado tallaabo sharciga waafaqsan ka hor inta aysan geysanin falal waxshinimo oo wax u dhimaya ammaanka muwaadiniinta iyo nabadgalya doonka ku nool dalka Mareykanka.
Arinka ayaa albaabka u furay in la isweydiiyo oo la baadi goobo dambiilayaasha u adeega Itoobiya ee kunool wadankaas iyo wadama kale, gaar ahaan Geeska Afrika.
W/D: Mohamed Ilyas / ONA/Norway